Axmed Madoobe oo Muqdisho u yimid caleema saarka Madaxweynaha Soomaaliya ee Muxamed C/ Farmaajo! | kowtharmedia.com
Home WARAR Axmed Madoobe oo Muqdisho u yimid caleema saarka Madaxweynaha Soomaaliya ee Muxamed C/ Farmaajo!
Axmed Madoobe oo Muqdisho u yimid caleema saarka Madaxweynaha Soomaaliya ee Muxamed C/ Farmaajo!
Feb 20, 2017WARAR
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) ayaa saaka soo gaaray magaalada Muqdisho, isagoo ka mid ah Madaxda maamul goboleedyada ee ka qeyb geli doona Munaasabada caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Axmed Madoobe ayaa ahaa ninka kaliya ee aan imaan magaalada Muqdisho intii ay socdeen ololaha doorashada iyo maalintii ay dhaceysay doorashada Madaxweynaha, halka Madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay qeyb ka ahaayeen ololaha doorashada, ayna u kala ololeynayeen Musharaxiinta qaar oo Itoobiya ay wadatay.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu wadaa in kulankii u horeeyay la qaato Madaxeynaha la doortay Maxamed C/llaahi Farmaajo, iyadoo maamulkiisa uu ka mid ahaa meelaha laga soo dhoweeyay doorashadiisa.
Qaban qaabada Munaasabada caleema saarka oo dhici doonta maalinta Arbacada ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho, waxaa lagu wadaa inay ka qeyb galaan wafuud caalami ah oo ay ku jiraan madax ka socota wadamada deriska ah.
Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa casuumaad u dirtay madaxda wadamada deriska ah, si ay uga soo qeyb galaan munaasabada caleema saarka Madaxweynaha cusub.
Sanadkii 2012 waxaa caleema saarkii Madaxweynihii hore Xasan Sheekh maxamuud ka soo qeyb galay Madaxda dalalka Jabuuti iyo Itoobiya, wakiilo matalayay Madaxda Kenya, Uganda, Sudan iyo kuwa kale, waxaase sanadkan la filayaa inay ka duwanaato afar sano ka hor.
Previous PostWar deg deg: Milkiilaha Tv-ga Universal oo lagu soo daayey Amar kasoo baxay Madaxwaynaha Cabdi M/ illey Cadeyn (Sawirro) Next PostHub iyo Qalabka Dagaalka nuucii ugu dambeeyay oo lagu soo bandhigay Abu Dhabi (Daawo Muuqaal)